Taarikhda Xidiga Barcelona Lionel Messi –
Home Lionel Messi Taarikhda Xidiga Barcelona Lionel Messi
Xariif-Lionel Messi waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu weyn kubada Cagta. Awoodiisa, iyo kartidiisa sidoo kale awoodda u gaarka ah ka soo Aanu Qabaneyn difaac kasta oo daafaca, Xidigan ayaa waligiis ku jiri doona xusuusta taageerayaasha malaayiin Qof.
Ciyaaryahanka Taariikhdiisa hadiii aan ka warano wuxuu dhashay bishii June 24, 1987 ee Rosario, Argentine. Waxa uu ku koray qoys ballaaran wuxuuna leeyahay labo walaalo ah, Matias iyo Rodrigo, iyo walaashii Maria Sol.
Jorge Horacio, oo ah aabaha Lionel, ayaa ka shaqeeyay warshad Birta , laakiin xilligiisii ​​firaaqada ayuu macalin u ahaa koox kubada cagta dhalinyarada ah, hooyadiina waxa la odhan jiray Celia Maria waxay ka shaqeysay qaybta Adeega.
Si kastaba ha noqotee, inkastoo qoysas fara badan uu kasoo jeedo.
Lionel’s messi ayeydiina waxay mas’uul ka ahayd waxbarashada tayada dhallinyarada.
Markii uu Lionel 5 jirsaday, waxay ka caawisey inuu ku biiray “Grandoli” oo uu ay qancisay qoyska oo dhan in wiilku noqon doono ciyaaryahan dhab ah.
Waxay sheegtay in ilmuhu leeyahay xirfado waaweyn oo aan carruurta kale haysan.
Mustaqbalka, Lionel messi ma ilaawin taageeradii ay u fidisey ayeydii Celia, isagoo u kali yeeley dhamaan goolasha uu dhaliyey oo dhan.
Taariikhda Waxbarashada Iskuulka, Lionel wuxuu ahaa arday aad uwanaagsan waxbarashada, laakiin inta badan waqtigiisii ​​wuxu ​​ciyaaray kubada cagta.
markuu Da ‘diisa sideed sano, ciyaaryahankan da’da yare ee kubadda cagta ayaa durbadiiba u ciyaarayay kooxda Xirfadleyda Newell Old Boys, kooxdan oo uu soo saartey xiddigo caan ah oo adduunka ka mida.
wuxuu ka mid noqdey Xubin ka mid ah ciyaartoyda dhalinyarada ah, Messi ayaa helay abaalmarintiisii ugu horreysay ee Koobka Friendship Cup ee Peru. Wiilku wuxuu ahaa ciyaaryahan aad u balanqaaday, naadiga Argentinean ee “River Plate” ayaa aad u xiiseynayay ciyaaryahan ahaan, lakiin messi xiligaa kuma biirin kooxdaa.
laso Qaybta 2aad Taariikhda Messi
la wadaag asxaabtaada oo u share gareee
Neymar oo ugu dambeyntii shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ka tago PSG iyo inkale.